TOETRY NY ANDRO :: Ho tsara ny andro mandritra ny fetin’ny faran’ny taona • AoRaha
TOETRY NY ANDRO Ho tsara ny andro mandritra ny fetin’ny faran’ny taona
Hihena ny habetsaky ny rotsak’orana amin’ny faran’ ny taona sy ny vaovao amin’ny faritra maro manerana ny Nosy. Hisy « anticyclone » hapetraka any amin’ny Faritra Atsinanan’ny morontsiraka mandra-pahatonga aty amin’ny Faritra Boeny sy Sofia.
“Mety haharitra hatramin’ny 2 janoary ity zava-misy ity ary tokony hampihena ny fisian’ny orana mandritra ireo fotoana voatondro ireo”, araka ny fanazavana voaray avy ao amin’ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Raha ny vinavina manokana navoakan’ny avy ao amin’ity sampana ity hatrany, mety tsy hisy tranga tokony hampitahotra mandritra ny fetin’ny faran’ny taona io.
Rotsak’orana manify no mety hisy amin’ny tendrony avaratra sy ny avaratra Atsinanan’ny Nosy. Saika handrahona avokoa ny any amin’ny morontsiraka rehetra arahina orana tandrifin-drahona any amin’ny faritra afovoany atsinanan’ ny Nosy. Handrahona ihany koa aty amin’ny faritry ny afovoan-tany ary mety harahina erika manify.
Ho tsara avokoa ny andro amin’ny toeran-kafa. Any amin’ny Faritra Bongolava sy Itasy ary Vakinankaratra no mety ahitana orana amin’ny takarivan’ny 31 desambra. Ho an’ny taona vaovao kosa, hitohy ny orana any amin’ny faritra avaratra andrefan’ny Nosy ny maraina. Handrahona ny andro any amin’ny morontsiraka andrefan’ny Nosy. Harahina orana izany any amin’ny faritra afovoany atsinanana. Hitohy ny rahona aty amin’ny faritra ny afovoan-tany ary mety ahitana erika manify. Hiverina ny fisian’ny orana mitsitaitaika any Bongolava, Itasy ary Vakinankaratra. Hanorana ny andro any amin’ny faritra avaratra atsinana sy atsimo atsinanan’ny Nosy.